Nezvedu - Qingdao Yuanhengtong Machinery Co., Ltd.
Izvo zvigadzirwa zvakagadzirwa ndeesimbi isina simbi, simbi, mhangura, aruminiyamu, nezvimwewo, izvo zvinonyanya kugona pakugadzira simbi dzesimbi, yemukati neyekunze tambo yekugadzirisa, uye lathe kugadzirisa kwemarudzi akasiyana emhangura, aruminiyamu nesimbi zvikamu. Qingdao Yuanhengtong Machinery Co., Ltd.ine simba rakasimba rehunyanzvi. Iyo iripo yepamusoro yakakura-yakakura machining centre, chaiyo otomatiki lathe, CNC yekuverenga kudzora lathe, chiridzwa lathe, chibhakera grinder uye imwe inotsigira yekugadzira michina, iyo yekugadzirisa chaiyo inosvika 0,005 mm, uye inoenderana kuyedzwa kwakwana.
Tiine hupfumi hwehunyanzvi ruzivo uye simba resainzi uye tekinoroji, isu tiri kugara tichivandudza, kubva pachigadzirwa dhizaini kune zvikamu zvekugadzira, kupa vashandisi neyakanaka mashandiro ekuita. Uye ine mukurumbira wakanaka uye sevhisi yemhando yepamusoro, inofarirwa nevatengi kumba nekune dzimwe nyika. Tinogamuchira nemoyo wese vatengi veChinese nevekunze kuti vauye kuzodyara, kuraira, komisheni kugadzirisa, dhizaini uye kugadzirisa. Ita zvemashini, simbi kugadzira, simbi kugadzira, Hardware nenhumbi, Stainless simbi kugadzira. Isu tinoda kushandira pamwe nemoyo wese nevatinoshanda navo kumba nekune dzimwe nyika kuti vagadzire pamwechete!